सपना देखाउनु पनि ठूलो कुरा हो : देवेन्द्र पौडेल (भिडियो अन्तर्वार्ता) – mYKantipur.Com
देवेन्द्र पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य हुन्। बैचारिक र अध्ययनशील नेताको छवी बनाएका पौडेल संघीय संसदका सदस्यसमेत छन्। पौडेलले सरकारका काम र पार्टीका तल्ला कमिटीको एकतामा देखिएको ढिलाई’bout नागरिकन्यूजका लागि श्रीराम पौडेलसँग समीक्षा गरेका छन्।
केपी ओली सरकारको कामको समिक्षा कसरी गर्नु हुन्छ ?
सरकारका ’bout बाहिर आलोचना सुन्दा सुन्दै पनि कुरा के हो भने यो सरकारले जनताका बीचमा गरेका प्रतिवद्ता पुरा गर्छ। जनताकाबीचमा गरेका प्रतिवद्वता सरकारले पुरा पनि गर्दैछ। सरकार आफ्ना काममा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
पाँच महिनामा नै धेरै कम गरे भन्दै हुनुहुन्छ त प्रधानमन्त्री ?
त्यसरी पनि नहेरौं। उहाँले जनतालाई सपना देखाउनु भएको छ। धेरै खोज्दै र जनताले बुझ्ने हिसाबमा उहाँले सपना देखाउनु भएको छ। देखाएका सपनाहरु समयमै पुरा भएपछि उहाँ नेपालमा सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिचित हुनुहुनेछ।
सपना देखाउनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो २०२७ सालमा जनकपुर – जयनगर रेल पहिलो पटक नेपालमा आयो। अहिले रेलको पुननिर्माण हुँदैछ भनौ। रेलको सपना प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको छ। पानी जहाजको हामीले प्रशंगै चलाएका थिएनौ। उहाँले पानी जहाज सम्भव छ भनेर सपना देखाउनु भयो। खै कहाँ आउँछै भन्दै कार्टुन बनाएर देखाउने काम पनि भएका छन्। तर सपना देखाउनु पनि ठूलो कुरा हो।
खासगरी प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दा, चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा र देशका आमसभामा भाषण गर्दा हामीलाई दुइ तिहाइ दिनुस् हामी सबै गर्छौं भनेको विषय एकै ठाउँमा मिसाएर हेर्दा हामी निकै उत्साहित थियौं। अर्थमन्त्रीले जारी गरेको स्वेतपत्रले देशको परिस्थिति कस्तो थियो भन्नेकुरा प्रस्तुत गरेको छ। घोषित गरेका विषय र प्रस्तुगरेको बजेटमा कहीँ न कहीँ ग्याप महसुस भएको छ। फेरी पनि वीरगञ्जदेखि काठमाडौं रेल ल्याउने कुरा, रसुवाबाट काठमाडौं रेल ल्याउने कुरा र काठमाडौंदेखि लुम्बिनी रेल लैजाने कुराको सर्वे त सुरु भएको छ।
नेपाल भारतबीचको सम्वन्ध निकै उतारचढावको स्थितीबाट गुज्रेको थियो। भारतसँगको सम्वन्ध बिग्रँदा हामीले झण्डै १५ खर्व बराबरको नोक्सानी व्यहोर्यौं। त्यतिनै बेला भूकम्प आयो। चीनसँग सम्वन्ध बनाउँदा भारत रिसाउने भारतसँग सम्वन्ध बनाउँदा चीन रिसाउने। यस्तो जिक ज्याकबाट हाम्रो उत्तर र दक्षिणसँगको सम्बन्ध गुज्रेको थियो। अहिले सरकारले दुबै छिमेकीसँग सुमधुर सन्तुलित कुटनीतिक सम्वन्ध कायम राखेको छ। र बिमस्टेकसम्म आइपुग्दा एक किसिमको सफलता मिलेको छ।
घर घरमा ग्यासको कुरा, सिन्डिकेट अन्त्यको कुरा, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने कुरा खास भिजिबल रुपमा देखिएनन् ?
ठेकेदारहरुले समयमै काम पुरा नगरेको विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
काम नभएका विषयमा तपाईहरु किन संसदमा कुरा उठानु हुँदैन ?
पार्टीको प्रसंग तर्फ जाउँ माथी जसरी एकता भयो त्यो तल जान सकेको देखिएन नि ?
त्यस्तो होइन। एकै पटक धेरै कामको लोड परेको हुँदा त्यस्तो देखिएको हो। पहिलो लोड भनेको सातवटा सरकारको निर्माणको विषय हो। प्रदेशको संरचना हाम्रोमा नितान्त नयाँ हो। पार्टीमा प्रदेशको संरचना, सातवटा सरकारको निर्माण, त्यहाँ प्रशासनिक विन्यास, यसो हुँदै गर्दा पार्टी एकता पनि भयो। यस्तो बेलामा नेतृत्वले समय लिएर छोचोल्न पर्ने हुन्छ। सबैले गर्छु भनेर पनि हुँदैन। पार्टीमा मनमुटाव भएको नभनौं। पार्टी जीवनमा वहस हुन्छ, छलफल हुन्छ कहिलेकाँही अविश्वास पनि हुन्छ।
तल्ला कमिटीको एकता’bout प्रतिवेदन दिने विषयमा समय थप भइरहेको छ ?
भारत जानु अघि प्रचण्डले काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने संकेत गर्नु भयो, उहाँको उत्तर दक्षिण भ्रमण शक्ति संचयको लागि त हैन ?
प्रधानमन्त्रीको छलफल औपचारिकरुपमा हुन्छ। पार्टीको अध्यक्षले गर्ने छलफल अनौपचारिक पनि हुन्छ। शक्ति आर्जनको लागि छिमेक धाउनु पर्दैन। दुई अध्यक्षबीच बुझाईमा समानता छ। केही विषयमा नमिल्न सक्छ त्यो पार्टीमा छलफल पछि हल हुने विषय हो।
ओली जीले सपना धेरै देखाउनु भयो काम गर्न सक्नु भएन ? सहमत ?